Kacha mma Ewepụghị Head ọnụ ara M8 Ọgwụ Packers ígwè 16 * 120mm China factory omenala Manufacturer na Factory | Boyu
ogwu ngwugwu ngwa:
Ọrụ sludge tank, Concrete mgbape seepage, elu nsogbu ịgbanye epoxy resin, leakage nkwụsị n'okpuru mmiri, mmiri igbochi.
Crevice na ihe slab Site-mgbidi anwụrụ, nkuku, leakage nke mmiri; Concrete owuwu leak, Board Ọdịdị cracks ewepụghị isi grout Ọgwụ packers nke waterproof ihe Pu ụfụfụ epoxy mgbape akara maka elu nsogbu injection mgbapụta.
Kedu ihe bụ uru ụlọ ọrụ gị?
1.Otu ndi otu anyi nwere iji kwado ire ahia gi.
Anyị nwere ndị R&D pụtara ìhè, ndị otu QC siri ike, ndị otu teknụzụ mara mma na otu ndị na-ere ahịa dị mma iji nye ndị ahịa anyị ọrụ kacha mma na ngwaahịa.
2. Anyị nwere onwe anyị ụlọ mmepụta ihe na kpụrụ a ọkachamara mmepụta usoro si ihe onwunwe kpọbata na Nlụpụta na-ere, nakwa dị ka a ọkachamara R&D na QC otu. Anyị na-echekwa onwe anyị mgbe niile na ọnọdụ ahịa. Anyị dị njikere ịmebata nkà na ụzụ na ọrụ ọhụrụ iji gboo mkpa ahịa.
3. Nkwado ogo.
anyị nwere akara aka anyị ma lekwasị anya na mma dị ukwuu, na ahịa China, ngwaahịa anyị bụ ahịa kachasị ekpo ọkụ ma na ntanetị na ntanetị.
Online oru nkwado
Project Solution ikike:ihe ọsịse
Hotellọ oriri na ọ Hotelụụ, Villa, artmentlọ, Buildinglọ Ọrụ, Hospitallọ Ọgwụ, Schoollọ Akwụkwọ, Mlọ Ahịa, Sportslọ egwuregwu, Ebe Ntụrụndụ, Superlọ ahịa, Wlọ nkwakọba ihe, Onodi, Park, Farmhouse, Ogige, Ihe
ndị na-ebu ọkpọ, Ihe ndị ọzọ na-egbochi mmiri
ígwè, Nchara, Rubber
250 PC / katọn
Ndị nrụgide na-ebugharị aluminom dị elu, nweta ewu ewu na ahịa China n'ihi ọnụahịa ya, oke ngwa ngwa, arụmọrụ dị elu, na nhazi gburugburu ebe obibi dị mma. Nwee nha abụọ n'obosara 10 mm na 13 mm, ogologo ahaziri. Anyị na-atụ aro ka ị jiri ndị na-ebu ogwu na igwe ogwu anyi.
Ihe ndi ozo na-egbochi mmiri
Akwa siri ike roba, adịghị mfe na-emebi emebi
Aluminom dị elu, ọ dịghị mfe ịgbagọ
A na-anagide ya na nrụgide dị elu, mmetụta dị mma nke mmiri, àgwà dị mma, ọrụ dị mma
Wayzọ okpuru, ọwara, culvert, arụ ọrụ sludge tank, Ihe mgbape seepage, leakage nkwụsị n'okpuru mmiri.
Re, n'okpuruala ụgbọala, n'okpuruala Itie, crevice na ihe slab
Site na mgbidi ọkpọkọ, nkuku, nkwụsị mmiri;
Concrete owuwu leaking, Board Ọdịdị cracks;
Biko kwupụta Ọnọdụ ahụ mgbe ị na-etinye iwu, hapụ anyị ịhịa aka n'ahụ anyị ma ọ bụrụ ajụjụ ọ bụla.
Nke gara aga: Ewepụghị Head ọnụ ara M6 Ọgwụ Packers ígwè 13 * 115mm China factory hazie imewe
Osote: Brass agba Ọgwụ Packers nchara 13 * 100mm A10 grouting ogwu kpokọtara
Ewepụghị Button Head Packers
Ewepụghị Head Ọgwụ Packer
ewepụghị button isi grouting ígwè ọgwụ packe ...
Ewepụghị Head Ọgwụ Pack Aluminium 13 * 100mm / ...
Waterproof Gray Aluminium Ewepụghị Head ígwè Injec ...
Ewepụghị Head ọnụ ara M8 Ọgwụ Packers ígwè 18 ...